AMISOM oo loogu baaqay inay banneyso staadiyamka Moqdisho - BBC Somali
AMISOM oo loogu baaqay inay banneyso staadiyamka Moqdisho
27 Nofembar 2016
Xidigihii hore ee kubadda cagta Soomaaliya ee sanadii 70-naatkii ilaa 80-naatkii ayaa qaarkood haatan dib ugu noqdeen dalka oo ay muddo ka maqnaayeen. Qaar ka mid ah ciyaartoygaa hore ayaa ku baaqay ciidamada AMISOM laga raro garoonka weyn ee Muqdisho Studium.
Waxay sheegeen in tallaabadaasi gacan ka gaysan doonto kor u qaaddida tayada farsamada ciyaareed ee ciyaartoyga dalka.
Maxamed Cumar Baakay, ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay laba ka mid ah ciyaartoygaa aadka loo yaqaanay oo kala ah Axmed Cabdikariin Walaayo oo ku magac dheer CANTAR JEENYO oo u ciyaari jiray kooxda JEENYO 72 kii ilaa 80 kii iyo Cabdicasiis Xaaji oo loo yaqaan Giftin oos isna u safan jiray kooxdii FIAT AMA WAGAD, sanadihii todobaataneeyadii. Baakaay ayaa ugu horray Cantar Jeenyo waydiiyey bal markii la kala yaacay halkuu dunida ka galay!
Maqal Soomaaliya oo ka qayb galaysa cayaaraha Paralympics
Soomaaliya oo ka qayb galaysa cayaaraha Paralympics
Maqal Hargeysa:Hooyo haa tahriibin
Hargeysa:Hooyo haa tahriibin
Maqal Waraysi: Waa kuma madaxweynaha cusub ee Zimbabwe
Waraysi: Waa kuma madaxweynaha cusub ee Zimbabwe
Maqal Dhageyso:Nabadaynta Suuriya oo laga shiraayo
Dhageyso:Nabadaynta Suuriya oo laga shiraayo
Maqal UNHCR oo dhaqaale u ururinaysa qaxootiga Afrika
UNHCR oo dhaqaale u ururinaysa qaxootiga Afrika
Maqal Dhegeyso barnaamijka Ogaal
Dhegeyso barnaamijka Ogaal
Maqal Wareysi: Madaxweynaha la doortay ee Somaliland
Wareysi: Madaxweynaha la doortay ee Somaliland